Eeg AutoCAD 2010 sida AutoCAD 2007 - Geofumadas
Eeg AutoCAD 2010 sida AutoCAD 2007
Oktoobar, 2009 AutoCAD-AutoDesk
Ka hor inta aanan ka hadlin sida loo isticmaalo Ribbon of AutoCAD 2010 (Taasi waxay ka timid 2009 waxayna wali ku jirtaa AutoCAD 2012). Waa tan ugu fiican, sababtoo ah ka hor inta aan la jaahwareerin ... si ay uga faa'iidaystaan, waxay leedahay.
Laakiin waxaa suurtagal ah in qof, oo aan waqti badan ku helin inuu isticmaalo (is-dhiibidda) iyo dhakhsaha si uu u dhamaystiro shaqada degdega ah wuxuu doonayaa inuu muuqaal ahaan ka muuqdo version AutoCAD 2007. Halkan waxaan ku arki doonaa sida:
Sababtaas awgeed waa inaad tagtaa tabarka
oo halkaas ka dooran CUI
Waxa kale oo si toos ah looga samayn karaa kumbuyuutarka, oo leh amarka cui ama nadaafada
Ka dibna guddiga loo soo bandhigo, waxaan doorannaa tabarka wareejinta, haddii aan la arki karin, waxaa lagu dhaqaajiyaa fallaadhaha hoose.
Xulashada Meelaha Shaqada, waxaan dooran AutoCAD Classic oo leh badhanka midigta saxda ah iyo firfircoonaanta Wakhtiga hadda jira.
Ugu dambeyntii waan sameynaa Ok
Halkaas ayay ku leeyihiin, inay soo celiyaan wixii isku mid ah oo la sameeyo, inkasta oo tabo u muuqato dhinaca bidixda si ay u doortaan jawiga kale ee shaqada.
Post Previous«Previous I-model, betley cusub
Post Next Sida loo hagaajiyo xawaaraha internetkaNext »
10 jawaabta "View AutoCAD 2010 sida AutoCAD 2007"
Febraayo, 2014 at
Sidoo kale maqaalkani wuxuu ka yimid dhowr sano ka hor, sidaas darteed waxa laga yaabaa in ay is bedesho muddo ka dib.
Antonio isagu wuxuu leeyahay:
Thanks inkasta oo ay igu kacday wax yar sababtoo ah waxaan ku haystaa Isbaanish, mana u egtahay sida sharaxaaddaada.
Xaqiiqdii, calaamaddaadu waa mid waxtar leh.
Grillolmedo isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2013 at
Waxaan ku dhawaaday qolka oo idil oo raadinaya jawaabtaan !!! WAXYAABAHA KALA DUWAN QAADASHADA ... DADKA DIB U HABO
xXlemonXx isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2010 at
Waa maxay fiican!
Waqtigan xaadirka ah ma heysto wakhti aan ku helo, laakiin waxay u egtahay mid fiican waxayna u muuqataa mid ka fudud sida version 2007 yahay. Wax yar oo iga yara ihi waxa weeye in aanan la qabsanin tabaha hoose ee horey u ahaa: iwm, iwm iyo kuwo kale oo loo isticmaalay inay doortaan xuduudaha aan u baahanahay. Waa arrin waqti. Waad ku mahadsan tahay waxtarka.
Joel isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2010 at
Thanks, waxay i caawisay wax badan sababtoo ah jaamacadda waxaan isticmaalnay 2010 laakiin la wareegay isdhexgalka.
Waad ku mahadsan tahay wax badan !!!
Waxaan nahay dad badan, sida ugu dhakhsaha badan ee aanu u furi karno, waan waalanahay!
Carlos isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2010 at
Pana mahadsan. Tani waa macluumaad dheeri ah oo lagu qiimeeyo kuwa aad naga mid tahay oo leh autocad 2010 waxaananu shaqeynay 2007
Hehe, dabka shid. Waa maxay fikrad fiican.
Matias isagu wuxuu leeyahay:
WAAD KU HAYSAN LOCO !!!!!!!!!! HALKAN WAX SOO DHACAY DHAMMAAN DHAMMAAN. RADIIDKA RIBON ILA HELI KARAA, WAXA LAGA HELAY WADADA SHAQADA ILAA MAXAY, AMA MAGACA MAALIN ILAAHAY IN AAD U BAAHAN YAHAY IN AAD KA QABTO.
Marco A. isagu wuxuu leeyahay:
Dhibaatada waa in aan haysto Isbaanish, iminka ma fahmo xD.